အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 05h 35m 17.3s, −05° 23′ 28″
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ (Messier 42, M42, သို့မဟုတ် NGC 1976 ဟုလည်းသိထား) သည် နဂါးငွေ့တန်းထဲမှ အိုရိုင်ယွန် ကြယ်စုတန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် ကောင်းကင်တွင် အတောက်ပဆုံး နက်ဗျူလာဖြစ်ကာ သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ M42 သည် ကမ္ဘာမြေမှ ကြယ်တာရာများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မွေးဖွားရာနယ်မြေနှင့် အနီးဆုံးဆီသို့ ၁,၃၄၄ ± ၂၀ အလင်းနှစ် ကွာဝေးသည်။ M42 သည် အလင်းနှစ် ၂၄ အကွာထိ လွှမ်းခြုံထားသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယင်းသည် နေထုထည်ထက် အဆပေါင်း ၂ဝဝဝ ပိုများသည်။ ရှေးစာပေများတွင် အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာအား ကြီးကျယ်သော နက်ဗျူလာ ဟု မကြာခဏ ရည်ညွန်းလေ့ရှိကြသည်။ အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာသည် ညဘက်ကောင်းကင်တွင် ဆန်းကြယ်သည့် ဓာတ်ပုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အရာဝတ္ထုများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
မြင်နိုင်သောအလင်းထဲမှ အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာတစ်ခုလုံး
05° 35′ 17.3″
1,344±20 ly (၄၁၂ pc)
၁ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ
DSLR ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ ဝါရင့်ပုံ
နက်ဗျူလာအား အလင်းအနှောက်အယှက်အချို့ရှိလျင်တောင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ တယ်လီစကုပ်အသေးစားဖြင့်ဆိုပါက နက်ဗျူလာအား သိသာစွာမြင်နိုင်သည်။ အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာတွင် နုပျိုသော open cluster ပါဝင်ပြီး Trapezium ဟုသိထားသည်။ Trapezium သည်လည်း ပိုမိုကြီးမားသော Orion Nebula Cluster ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ကြယ်တာရာပေါင်း ၂၈ဝဝ ခန့်နှင့် အချင်းအားဖြင့် အလင်းနှစ် ၂ဝ ခန့် လွှမ်းခြုံထားသည်။
မိမိတို့ ယနေ့တွေ့ရသည့် အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာထဲမှ အတောက်ပဆုံးနှင့် အနုပျိုဆုံးကြယ်များသည် သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ် ၃ဝ,ဝဝဝဝ ထက်မပိုပေ။  အတောက်ပဆုံးကြယ်များသည် နှစ် ၁ဝ,ဝဝဝ ဝန်းကျင်တွင် ရှိနိုင်သည်။
ALMA အပေါ်မှ အိုရိုင်ယွန်
APEX မှမြင်ရသော အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ ကြယ်တာရာမွေးဖွားမှုမြင်ကွင်း
၂.၂ မီတာ တယ်လီစကုပ်ဖြင့် အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာအား ဖမ်းယူမိသည်
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာတွင် M42, M43 နှင့် အခြားများစွာသော အိမ်နီးနားချင်းများပါဝင်သည်
Nikon D70 ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ကူးသည့် အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ မြင်ကွင်း
နာဆာ၏ Spitzer Space Telescope မှရိုက်ကူးထားသော ကြယ်ပေါက်စများ
၂.၂ မီတာ တယ်လီစကုပ်ဖြင့်ရိုက်ကူးသည့် အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ အလယ်ဗဟိုပိုင်း
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံ
Spitzer Space Telescope ၏ အိုရိုင်ယွန်
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ အကြီးဆုံးကြယ်များ
ပွင့်သစ်ကာစကြယ်များသည် အိုရိုင်ယွန်တွင်တည်ရှိသည်ဟု အနီအောက်ရောင်ခြည်မှ ညွန်ပြနေသည်
ကြယ်များဖြင့် ခွဲခြားထားသော နက်ဗျူလာ၏ အသေးစိတ်
အိုရိုင်ယွန် နက်ဗျူလာ၏ X-ray မြင်ကွင်း
↑ ၁.၀ ၁.၁ SIMBAD Astronomical Database။ Results for NGC 7538။ 2006-10-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Will Gater, Anton Vamplew, The Practical Astronomer, page 242
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Trigonometric Parallaxes of Massive Star Forming Regions: VI. Galactic Structure, Fundamental Parameters and Non-Circular Motions" (2009). Astrophysical Journal 700: 137. doi:10.1088/0004-637X/700/1/137. Bibcode: 2009ApJ...700..137R.
↑ NGC 1976 = M42။ SEDS.org။ 2009-12-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Distance to Orion KL Measured with VERA" (2007). Publications of the Astronomical Society of Japan 59 (5): 897–903. doi:10.1093/pasj/59.5.897. Bibcode: 2007PASJ...59..897H.
"Nebula" ။ The American Cyclopædia။ 1879။ Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (အကူအညီ)
↑ "Preliminary Study of the Orion Nebula Cluster Structure and Dynamics" (1998). Astrophysical Journal 492: 540-553. doi:10.1086/305076. Bibcode: 1998ApJ...492..540H.
↑ "Detail of the Orion Nebula
"Animated tour of the Orion Nebula" Archived6June 2013 at the Wayback Machine., University of South Wales
Computer visualization of Orion Nebula. Archived 25 April 2014 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုရိုင်ယွန်_နက်ဗျူလာ&oldid=638643" မှ ရယူရန်
၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။